ကဗျာလေး မူးနေပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကဗျာလေး မူးနေပြီ	4
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Dec 29, 2016 in Creative Writing, Poetry |4comments
ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးသားတွေ သဘောကျမယ့် ကဗျာ နှစ်ပုဒ်ပါ။ ယမကာလုလင် တွေ မူးနေပြီဆိုတော့လေ သူတို့ ကဗျာပါ မူးသွားပါရော။ The Drunk Poem ဆိုတဲ့ ကဗျာကတော့ စာဆိုရှင် အမည်မသိ။ အင်းလေ မူးနေရင်း စပ်တာဆိုတော့ သူ့ဟာသူ မေ့သွားမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ မမေ့ဘူး။ အဲဒီကဗျာထဲက အသုံးအနှုန်းတွေ ဒီကနေ့အထိ သုံးစွဲနေတုန်း။ လုံးဝခေတ်မတိမ်သေးတဲ့ အသုံးအနှုန်းကတော့
(၁) Starkle, starkle, little twink = Twinkle Twinkle little star
(၂) The alcofluence of incohol = The influence of alcohol
(၃) slort of sheep = short of sleep
(၄) thinkle peep = people think
(၅) fink to drill = drink to fill
မြန်မာစကားမှာ ဆိုရင် ဥပမာ “လောကဓံ” ကို စကားလိမ်နဲ့ ပြောရင် “လံကဓော” ဆိုတာမျိုးပါ။ သူတို့ရဲ့ စကားလိမ် (spoonerism) တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ စကားလိမ်ထဲက နံပါတ် ၂ နှင့် ၄ က အသုံးတွင်ဆုံး စကားလိမ်တွေလို့ ထင်မိပါတယ်။ အဲဒီအသုံး မကြာခဏ တွေ့ရလို့ပါ။ မူးနေတဲ့ ကဗျာလေး ကို မြည်းစမ်းကြည့်ရအောင်။
”The Drunk Poem”
‘Cause I got all day sober to Sunday up.
ကဗျာက Twinkle Twinkle little star ကဗျာ အလိုက်အတိုင်း ရေးထားတာပါ။ ကလေးတွေ အကြိုက် ကဗျာကိုတောင် ယမကာဘုရင်တွေ အလွတ်မပေးဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့်ပဲ အနုပညာမြောက်သွားတာလား မသိဘူး။ တဆက်တည်း ကလေးကဗျာလေးကို လည်း အောက်မေ့သတိရမယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အထက်က မူးနေတဲ့ကဗျာ ကို သဘောလောက် စကားပြေပြန်ပါမယ်။ စကားလိမ်နဲ့ ရေးတာဆိုတော့ အတိအကျ ပြန်လို့ မရပါဘူး။ အပေါ်ဆုံးတစ်ကြောင်း လွှတ်ပါမယ်။
— မင်းငါ့ကို ဘာထင်နေသလဲကွ။
မင်းပြောသလို အရက်ဟာ ငါ့အပေါ် သြဇာညောင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး။
— ငါအိပ်ရေး နည်းနည်းပျက်နေတာ။
လူတွေပြောသလို ငါ မူးရူးနေတာ မဟုတ်ဘူး။
ခုထိတော့ ငါဘယ်သူလဲ မသိသေးဘူး။
ဒါပေမယ့် ငါ ကြာကြာရပ်လေ မူးလေပဲ။
( the drunker I stand here the longer I get = the longer I stand here the drunker I get)
— ဒါကြောင့် ခွက်ထဲ ဖြည့်လို့ရအောင် ငါထပ်သောက်ပါရစေ။
နောက်ထပ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကတော့ ၂၀ ရာစုခေတ်ရဲ့ အကျော်ဇေယျ ကဗျာဆရာ W.B.Yeats စပ်ခဲ့တဲ့ အင်မတန် ကျော်ကြားတဲ့ အချစ်ကဗျာလို့ ပြောရမလား၊ အရက်ကဗျာ လို့ပြောရမလား မသိတဲ့ကဗျာပါ။
W.B.Yeats ဟာ အင်္ဂလန်မှာ အခြေချခဲ့ပေမယ့် အိုင်းရစ်စ်လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၃ ခုနှစ်မှာ စာပေနဲ့ နိုဗယ်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရပါတယ်။ ကဗျာကတော့ တိုတိုလေး။
‘A Drinking Song”
— ခံတွင်းထဲကနေ ၀ိုင် ၀င်လာတယ်။
မအိုခင် မသေခင် အမှန်တရားအဖြစ်
မင့်ကိုကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချမိတော့တယ်။ ။
kai says: လူတွေပါမူးနေကြသလားမသိ..။
Thint Aye Yeik says: Dec 31 ညကို မမူးပဲ ဖြတ်သန်းတဲ့ အမျိုးသားနဲ့
ဘယ်သင်းက ပိုများမယ် ထင်တုန်းဗျို့။
ရန်ကုန်မှာတော့ အရက်ပုလင်းတွေ ရောင်းကောင်းလွန်းတဲ့ည. . .
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဆောရီးပါ..ရွာထဲမရောက်ဖြစ်တာကြာလို့ဒီနေ့မှဖတ်ရတယ်…
“ယမကာဘုရင်များအား ဂုဏ်ပြုလျက်” ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ပြုတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်..ဟဲဟဲဟဲ Twinkle, twinkle, little star, ကိုတော့မသိသူမရှိလောက်ဖူးမှတ်ပါတယ်..
“Starkle, starkle, little twink,
The alcofluence of incohol”
ဘာသာမပြန်ပဲ ရွတ်ရတာပိုအရသာရှိသဗျ…..ဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ မပြုံး Log in to Reply	+1	Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: အရက်ဟာ ငါ့ပေါ်သြဇာညောင်းနေတာ
Log in to Reply	+2	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.